NCS Graduate Opportunities - Vakio ity mba handray anjara! - Society Society
Manantena izahay fa ny tanananareo dia nanana fotoana tsara niaraka taminay tao amin'ny NCS tamin'ity fahavaratra ity ary tianay ny hahita anao manohy ny dianao amin'ny alalan'ny iray amin'ireo fandaharam-pianarana izahay.
Fanatanterahana ny fivorian'ny tanora
Date: 2nd octobre 2018
Time: 6pm hatramin'ny 7pm
Location: House House, Arundel Street, S1 2NT
Info: Ny Biraon'ny Tanora tanora dia mamolavola ny zavatra rehetra ataontsika ho fiantrana! Hanampy anao ny drafitra manaraka ny NCS amin'ny fotoana manaraka, handamina ireo zava-mitranga & fanentanana izay ahafahan'ny tanora manerana ny tanàna handray anjara sy manampy amin'ny famolavolana ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana amin'ny fomba fijerin'ny tanora.
Ahoana ny fisoratana anarana: Manatòna ny fivoriana fanentanana ary hahita bebe kokoa na mandefa mailaka Rich on Richard.r@elementsociety.co.uk to chat about getting involved.
Mpitarika amin'ny fampiofanana fivoriana fanombohana:
Fotoana: 6pm - 7pm
Info: Ity fampiofanana maimaim-poana ity dia handrafitra ny Module ao amin'ny Leadership, ny Team Dynamics, ny Fahatakarana ny Fahalalahana sy ny Fifandraisana amin'ny Fifandraisana. Ity fampiofanana ity dia mikendry ny hanome anareo ny sisintany rehefa mivoaka eto amin'izao tontolo izao ary koa ireo dingana voalohany horaisina raha toa ka liana amin'ny fiasana amin'ny NCS ianao amin'ny ho avy.
Fihaonan'ny Induction Championship:
Info: Ny Champions Champions dia hanampy antsika hampiely ny teny momba ny NCs any amin'ny sekoly / oniversite ao Sheffield. Hikorontana ireo karavasy ianareo ary hanohana anao amin'ny fampiofanana maimaim-poana mba hahafahanao manampy anay hihiaka amin'ny NCS opportunities amin'ny fahavaratra 2019!
Ahoana ny fisoratana anarana: Mankanesa any amin'ny fivoriana fampidirana sy hahita bebe kokoa na mandefa mailaka Rich on Richard.r@elementsociety.co.uk to chat about getting involved.
Info: Tianay ny hahazo antoka fa afaka mifandray sy mifampiresaka amin'ny mpiasan'ny mpiasanay ny mpianatra nahazo diplaoma NCS. Ny tetikasa Mentor ao amin'ny Mentor dia mandrisika anao hanao sonia ary manana mpikambana amin'ny tale ho mpanolo-tsaina. Tsy manam-pahaizana izahay fa faly mijery ny CV / uni fampiharana na manohana anao amin'ny fampiharana asa sy ny dinidinika.
Ahoana ny fisoratana anarana: Email Rich on Richard.r@elementsociety.co.uk mba hifanakalozana ny fahazoana singa iray nomen'i Mentor.
Fanolorana Brokerage ao amin'ny Volunteer:
Info: Raha nahazo tsindrim-peo ianao hanohy hanova ny fiarahamoninao ao an-toerana nefa tsy fantatrao ny dingana tokony horaisinao aorian'io fahafahana io dia ho anao izany! Hanampy anao hitady ireo fahafaham-po mety ho tianao sy hanohana anao amin'ny fanasonianao azy ireo.
Ahoana ny fisoratana anarana: Email Rich on Richard.r@elementsociety.co.uk ary handamina fotoana sy fotoana mety hiresahana amin'ny mpiasa iray momba ny fahafahana.